အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွဒ်စ်နေ့ တွင် အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မိန့်ခွန်း /2020အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
မေ ၂၂, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၈ ညနေ News Code : 1039462 Source : ABNA Link:
အဗ်နာ သတင်းဌာန၏ သတင်း အထောက်အထားအရ ရဲဟ်ဗရ် ရေ မိုအဇမ် မေ အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ ခါနေနာအီ မှ ကွဒ်စ်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ရုပ်မြင်သံကြားတွင် တိုက်ရိုက် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်း ကိစ္စ သည် အစ္စလာမ့်လော က အတွက် အရေးကြီးပြီး မမေ့ရမည့် ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေး ဆိုသည့် ဗိုင်းရပ်စ် သည် ဒေသတွင်းရှိ မိုအ်မင် လူငယ်များ ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိ နှင့် ပျက်စီး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရဲဟ်ဗရ် မှ မိန့်ကြား ခဲ့ပါတယ်။
ရဲဟ်ဗရ် ရေ မိုအဇမ် မေ အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ မိန့်ခွန်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အနေဖြင့် ကမ္ဘာ အဝှမ်းရှိ မိမိ မွတ်စလင်မ် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အားလုံးကို စလာမ် ဆက်သပါ၏ ။ ပြီးနောက် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ထံတော် တွင် လမြတ်ရမ်တွာန် တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့် အေဗါဒသ်များ လက်ခံသဘောတူ ပေးရန် ဒိုအာပြုတောင်းဆိုပါသည်။ အီးဒ် ဒေ စအီးဒ် ဒေ ဖေသ်ရ် မရောက်မီအလျှင် မိုဘာရတ်က် ပြောကြားပါသည်။ ဤလမြတ် တွင် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင်၏ ဧည့်သည် တော် အဖြစ် ခစား ရသည့် အတွက် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အား ကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်။ ယနေ့ ကွဒ်စ်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနေ့အား အေမာမ်ခိုမေနီ (ရ.ဟ) အနေဖြင့် ဥာဏ် အမြော်အမြင် နည်းဗျူဟာ ဖြင့် ပါလက်စတိုင်းသားများ နှင့် ဗိုက်သိုလ်မိုကဒတ်စ် နှင့်အတူ မွတ်စလင်မ်များ တစ်စည်းတစ်လုံးတည်း ဖြစ်စေရန် နှင့် အသံ တူတူဖြစ်စေရန် အတွက် သတ်မှတ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။ ပြီးခဲ့သည့် ရာစုနှစ်အတွင်း ဤနေ့သည် မိမိ လုပ်ရပ်ကို ပြသ ခဲ့ပြီး နောင်တွင်လည်း ပြသ မည် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်န်ရှာအလ္လာဟ် ။ ကမ္ဘာ လူမျိုးစုများ အနေဖြင့် ကွဒ်စ်နေ့အား နွေးထွေး စွာ ကြိုဆို ခဲ့ကြပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်းများ ၏ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် အလံကို မပြုမနေရ အလုပ်တစ်ခု အဖြစ် မြင့်တင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျူးကျော် နယ်ချဲ့ အင်အားကြီးနိုင်ငံများ ၏ ပေါ်လစီမှာ မွတ်စလင်မ် ၏ စိတ်များ တွင် ပါလက်စတိုင်းကိစ္စ ကို အရောင်ပျော့ သွား ပြီး မေ့သွားရန် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အရေး အကြီးဆုံး တာဝန် ဝတ္တရားမှာ ဤခယာနသ် (အလွဲသုံးစားပြုမှု ) အား ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျူးကျော် နယ်ချဲ့ အင်အား ကြီး နိုင်ငံများ နိုင်ငံရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကွင်းပြင်တွင် လှုပ်ရှား နေသူများ အစ္စလာမ်နိုင်ငံ များရှိ (၎င်းတို့၏) အေးဂျင့်များမှ ဤအလွဲသုံးစားမှုကို စိတ်တိုင်း ကျပြုနေကြပါ တယ်။ သို့သော် ပါလက်စတိုင်း ကဲ့သို့ ကြီးကျယ် ပြီး ၊ မြင့်မြတ်သည့် ကိစ္စ ကိုမွတ်စလင်မ်များ ၏ သိက္ခာ နှင့် မာန မှ မေ့ခွင့်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုသည့် အမှန်တရား လည်း ရှိနေပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်များ အနေဖြင့် ပထမထက်စလျှင် ပါလက်စတိုင်း ကိစ္စ ကို ပို၍ သိလာ ကြပြီး အသိရှိလာကြပါတယ်။ အမေရိကန် နှင့် ဒေသတွင်းရှိ ၎င်း ၏ မဟာမိတ် နိုင်ငံများ ငွေ ကြေး မည်မျှပင် သုံးစွဲ ကြပါစေ ပါလက်စတိုင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့၏ ရှက်စရာ အစီအစဉ်များ ကို အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ကြမည် မဟုတ်ကြပါ။
ပထမဆုံး အနေဖြင့် ပါလက်စတိုင်း နယ်မြေ ကျူးကျော် ခံ ခဲ့ရခြင်း နှင့် ကင်ဆာ ပမာ ဇီယွန် ဝါဒ အဖြစ်ဆိုး အကြောင်း ကို အသိပေး ရန်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီ အတိတ်က လူသား ရာဇဝတ်မှု များ တွင် ဤအတိုင်းအတာ အထိ ပြင်းထန်သည့် မည်သည့် ရာဇဝတ်မှု မျိုးမှ မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ချေ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအား ကျူးကျော် လိုက်ခြင်း ပြီးနောက် ထိုနိုင်ငံနေ ပြည်သူလူထု အား အမြဲ အတွက် မျိုးရိုးပိုင် မြေမှမောင်းထုတ်ခြင်း ပြီးနောက် ၎င်းတို့အား သတ်ဖြတ်ခြင်း နှင့် ရာဇဝတ်များ ကျူးလွန်ခြင်း ၊ လယ်ယာမြေများ နှင့် လူမျိုးစုများ ကို ဖျက်စီး ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း ကို အများဆုံကြေကွဲ ဖွယ်ပုံစံ အထိဖြစ်အောင် ပြု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးနောက် ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုး အဆက်မပြတ် သမိုင်းဝင် ရက်စက် ညှဉ်းပန်း မှု ခံခဲ့ရပါတယ်။ အမှန်တကယ် လူသား ဖြစ်ပြီး သားရဲဆန်မှု နှင့် ရှိုင်တွန် အကျင့် စရိုက်၏ မှတ်တမ်း အသစ် တစ်ခုကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဤအဖြစ်ဆိုး ၏ တရားခံ အစစ် နှင့် တာဝန် ရှိ သူမှာ အနောက်နိုင်ငံများ နှင့် ၎င်းတို့၏ ရှိုင်တွန် ပေါ်လစီဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ ကမ္ဘာစစ် တွင် အောင်ပွဲ ခဲ့သည် အနောက်နိုင်ငံများ အနေဖြင့် အာရှ ဒေသ ရှိ တစ်နည်းအားဖြင့် အွစ်စမန်နီ အစိုးရ အော်တိုမန် အင်ပါယာ ပိုင်ပစ္စည်းများ ကို အရေးကြီးသည့် ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်း အဖြစ် ပါရီ ညီလာခံ တွင် အချင်းချင်း ခွဲဝေ ယူခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဒေသ တွင် မိမိတို့ ထာဝရ အမြဲ ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်ရန် အတွက် ထိုဒေသ ၏ နှလုံးသား (အဓိက အချက်အချာ ကြသည့် ) နေရာ ကို ထိန်းချုပ်ထားဖို့ အရေးကြီးကြောင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ခံစားမိခဲ့ကြပါတယ်။ ဗြိတိန် အနေဖြင့် နှစ် အချို့ အလျှင် Balfour အစီအစဉ်ကို တင်ပြခဲ့ပြီး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ငွေရှင် ကြေးရှင် ရဟူဒီ များကို အကြံတူ အတွေးတူ ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပြီးဤ အစီအစဉ်အား ရှေ့ ဆက် ရန် အတွက် ဇီယွန် စနစ် အမည်ရှိ စနစ်အသစ်အဆန်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အခု ဤအတွက် လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရှေ့ပြေးများ စီစဉ် ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် နှစ်အချို့ အလျှင် တစ်ဆင့်ပြီးတဆင့် ရှေ့ပြေးများ လိုအပ်ချက်များကို အစီအစဉ်တကျ အသင့်ဖြစ်အောင် ပြုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ်အပြီး ဒေသအတွင်းရှိ အစိုးရများ အာဏာပိုင်များ၏ အိပ်ပျော်နေမှု နှင့် အခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရမှုကို အသုံးချပြီး မိမိ အကြံကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ပြီးနောက် အတု ၊ ကျူးကျော်သူ ၊လူမျိုးမရှိသည့် အစိုးရ ကိုကြေငြာ ခဲ့ပါတယ်။
ဤတိုက်ချက်တွင် ပထမဆုံး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများ ပြီးနောက် ဒေသတွင်းရှိ လူမျိုးများ အားလုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေသတွင်း တွင် နောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာ သည့် အဖြစ်အပျက်များကို လေ့လာ ပြီး သိရှိနိုင်သည်မှာ အနောက်တိုင်းအာဏာပိုင်များ နှင့် ငွေရှင်ကြေးရှင် ရဟူဒီများ ၏ ဇီယွန် အစိုးရ တည်ထောင်ရခြင်း၏ အဓိက နှင့် ချက်ချင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ အနောက်နိုင်ငံများ အနေဖြင့် အာရှ တိုက်တွင် အမြဲ အာနိသင်ရှိနေစေပြီး တည်ရှိနေရန် နေရာတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသတွင်း ရှိ နိုင်ငံများ နှင့် အာဏာပိုင်များ၏ ကိစ္စတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက် ရန် နှင့် မိမိ တို့ စိတ်တိုင်းကြ ချယ်လည်နိုင်ရန် အနီးကပ် ဖြစ်နိုင်ခြေများကို ရယူထားရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတွက်ကြောင့် အစိုးအတု နှင့် ကျူးကျော် အစိုးရ ကို စစ်ဖက်အရ အင်အား အမျိုးမျိုး ကောင်းလာရန် နှင့် သာမန် ရိုးရိုး အထောက်အကူများ ရရန် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ယုတ်စွ နျူကလီးယားလက်နက်များ နှင် တန်ဆာ ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးနောက် နိုင်းလ်မြစ်မှ ဖူရသ် မြစ် အထိ ဒေသများကို ဤ ကင်ဆာရောဂါစိုးဖြင့် ကျယ်ပြန့်အောင် ပြုခဲ့ပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့် အာရပ် အစိုးရ အာဏာပိုင်အများစု သည် အစပထမက တည်း ကပင်လက်နက်ချ ခဲ့ ကြပါတယ်။ ၎င်းတို့မှ အချို့ အား ချီးကျူးတိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်် ဤကိစ္စ ၏ တာဝန် ခံ မှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖြစ်ပြီး ၎င်း ဝင်လာပြီး နောက်ပိုင်း အာရပ်နိုင်ငံများ မှ လူသားဆိုင်ရာ ၊ အစ္စလာမ်မီ ဆိုင်ရာ နှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ တာဝန် ဝတ္တရား များ ကိုလည်း ကောင်း မိမိတို့၏ အာရပ် သိက္ခာ နှင့် မာန်တို့ကိုလည်း ဘေး ချခဲ့ကြပါတယ်။ မှားယွင်းသည့် မျှော်လင့် ချက်များ ထားပြီး ရန်သူ၏ ရည်မှန်းချက်များ ကို ဖြည့် စီးပေးရတွင် အကူအညီပေးခဲ့ကြပါတယ်။ Camp David သည် ဤ ခါးသီးသည့် ဖြစ်ရပ်မှန် အတွက် ထင်ရှား သည့် သက်သေ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုဂျာဟစ်ဒ် အဖွဲ့အစည်းများ သည်လည်း ပထမအစနှစ်များတွင် အသက်စွန့် စတေးမှုများ နှင့် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီး တဖြည်းဖြည်း နယ်ချဲ့ ကျူးကျော် အားများ နှင့် ၎င်းတို့ အားကူညီသူများ နှင့် ရလာဒ်မဲ့ စေ့စပ် ဆွေးနွေးမှုများတွင် အချိန် ကုန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်းများ၏ မျှော်မှန်း ချက်ကို ဖြည့်ပေး နိုင်သည့် အပင်ပန်းခံမှု ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို လက်လွတ် လိုက်ကြပါတယ်။ အမေရိကန် နှင့်အခြား အနောက်နိုင်ငံများ ပြီးနောက် ထိရောက်မှုမရှိ ၊ အာနိသင်မရှိသည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှု ၊ စေ့စပ် ညှိနှိုင်းမှု သည် ပါလက်စတိုင်း အတွက်ခါးသီးပြီး မအောင်မြင်သည့် အတွေ့အကြုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် ဇိုက်သွန်ဌာနခွဲ ကိုတင်ပြချိန်တွင် အရှုံး ရလာဒ် မှ အပ အခြား မရခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံး ရာစေရ် အရ်ဖါသ် သံဝေဂ ရဖွယ် အဖြစ်နှင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။
အီရန် နိုင်ငံတွင် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး အောင်ပွဲခံပြီးနောက် ပါလက်စတိုင်းများ အတွက် ဂျေဟာဒ် ပြုနိုင်ရန် လမ်းစ အသစ် ဖွင့်သွားပါတယ်။ ပထမခြေလှမ်း အဖြစ် အီရန်ရှိုင်တွန် ဘုရင် ရှားဘုရင်လက်ထက် တွင်အီရန်ကို လုံခြုံရသည့်နေရာအဖြစ် ထည့်တွက်ထားသည် ဇီယွန် အဖွဲ့ဝင်များ ကို အပြင်သို့ထုတ်၍ ပစ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက် ဇီယွန် အစိုးရ ၏ တရားမဝင် သံရုံးကို ပါလက်စတိုင်း ကိုယ်စားလှယ်များကို လွဲပြောင်းပေးခြင်း ၊ရေနံ သယ်ဆောင်မှုကို ပိတ်ပင် ခြင်းမှ စ၍ အရေးကြီးအလုပ်များ နှင့် ကျယ်ပြန့်လာသည့် နိုင်ငံရေး ခြေလှမ်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရလာဒ် မှာ ဒေသတစ်ခုလုံးတွင် ကြံကြံခံအဖွဲ့ များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြဿနာ ကိုဖြေရှင်းရန် အတွက် မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်လာပါတယ်။ ကြံကြံခံခုခံအဖွဲ့ များ ထွက်ပေါ် လာပြီးနောက်ပိုင်း ဇီယွန် အစိုးရ၏ အလုပ် သည် ခက်၍ခက်၍ သွားပါတယ်။ အင်န်ရှာအလ္လာဟ် အနာဂတ်တွင် ပို၍ခက်ခဲပေမည်။
သို့သော် ဤ နယ်ချဲကျူးကျော် ကိုလိုနီ အစိုးရ ကို ထောက်ခံသူများ ၎င်းတို့တွင် ထိပ်ဆုံး တွင်ပါဝင်သည့် အမေရိကန် အနေဖြင့်လည်း ၎င်းအား ကာကွယ်ပေးမှုကို ပိုမို၍ ပြင်းထန် စွာ လုပ်လာပါတယ်။ လက်ဘနွန် နိုင်ငံတွက် မိုအ်မင် ၊လူငယ်လူရွယ် ၊ စတေးခံစိတ်ဓာတ်ရှင် ဟေစ်ဘွလ္လာဟ် ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်း နယ်နမိတ် အတွင်း တက် ကြွ စိတ်အား ထက်သန် သည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဟမါစ် နှင့် ဂျေဟာဒ် ဒေအစ္စလာမ်မီ ပေါ်ပေါက်လာ ပြီး နောက်ဆီယွန် အကြီးအကဲများပါမက အမေရိကန် နှင့်အခြား ရန်သူ အနောက်နိုင်ငံများ ပါ စိုးရိမ်ပူပန် ပြီး ပျားရီပျားယာ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမေရိကန် အနေဖြင့် နယ်ချဲ့ ကိုလိုနီ အစိုးရ ၏ အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ရေး ဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပေးပြီးနောက် ဒေသအတွင်း နှင့်အာရပ်အသိုင်းအဝိုင်း အတွင်း မိမိ အေးဂျင့်များ ကို ထည့် သွင်းခဲ့ပြီး ဟာဒ်ဝဲ ၊ဆော့ဖ်ဝဲ များ ဖြင့် ကူညီပေးဖေးမ ပါတယ်။ ဤကြိုးပမ်းမှု၏ ရလာဒ် အဖြစ်ယနေ့ အချို့ အာရပ် အစိုးရများ ၏ အကြီးအကဲများ နှင့် အချို့ သစ္စာဖောက်အာရပ် နိုင်ငံရေးသမားများ နှင်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားသူများ၏ အပြုအမှုများ နှင့် ထုတ်ပြန် ချက်များတွင် အားလုံး တွေ့ မြင်နိုင်ပါတယ်။
ယခုအချိန်ယှဉ်ပြိုင်မှု ၏ ကွင်းပြင်တွင် နှစ်ဖက်စလုံး ၏ လှုပ်ရှားမှု အမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင် နိုင်ပါတယ်။ ကွာခြားမှုတစ်ချက်မှာ ကြံကြံခံ အဖွဲ့များတွင် နေ့စဉ် နှင့်အမျှ အာဏာ ၊မျှော်လင့်ချက် နှင့်ခွန်အားတို့ တွင် ဆက်တိုက်တိုးတက်လျက်ရှိပါတယ်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း ဤ ဖက်နှင့် ဆန်ကျင့်၍ ဇိုလ်မ် ၊ ကိုဖ် နှင့် နယ်ချဲ့ ကိုလိုနီ အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လက်မဲ့ အချည်းနှီး ဖြစ်လာပါတယ်။မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့ပြီး မတတ်နိုင်သည့် အခြေ အနေသို့ သွားနေပါတယ်။ ဤအတွေးအတွက် ထင်ရှား သည် သက်သေမှာ အရှုံးမရှိသည့် ၊လျှပ်စစ်ပမာ ဖြစ်သည့် ဇီယွန် စစ်တပ် ၊ ၎င်းတို့မှကြီးမားသည့် စစ်တပ် များကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် နိုင်ငံကြီး ၂နှစ် ငံ ၏ တိုက်ခိုက် မှုကို ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ရပ်တန့်ပေးသည့် စစ်တပ်သည် လည်း ယနေ့ လက်ဘနွန် နှင့် ဂါဇာ ရှိ ကြံကြံခံခုခံ လူထု တပ် ၏ရှေ့တွင် မခံနိုင်ဘဲ နောက်ပြန်ဆုတ် ခြင်း နှင့် အရှုံး ပေးခြင်း မှအပ မတတ်နိုင်ဘဲ ရှိနေပါတယ်။
ဤအခြေအနေတွင် ရှိနေသော်လည်း ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကွင်းပြင်သည် အလွန် အန္တရာယ် ကြီးပါတယ်။ အခြေအနေများ ပြောင်းလည် သွား နိုင် ပါတယ်။ အမြဲ စိုးရိမ် နေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဤယှဉ်ပြိုင်မှု ၏ အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ်မှာ အရေးကြီးပြီး အဆုံး အဖြတ် ပေးမည့် အသက် သွင်း ပေးမည့်ပွဲ လည်း ဖြစ်ပါတယ် ၊ အခြေကျ ခန့်မှန်းချက်များ တွင်မည်သည့် လျစ်လျူရှုမှု ၊ရိုးရိုးတွေးခေါ်မှု နှင့်အမှား ပြု၍ မရချေ။ပြုမိလျှင် ကြီးမား သည့် ဆုံး ရှုံးမှု နှင့်ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအခြေခံ အပေါ် မူတည်၍ ကျွန်တော်အနေဖြင့် ပါလက်စတိုင်းကိစ္စ ကို နှလုံးသား ဖြင့် ဆက်နွယ်နေသူများ ( လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လက်ခံနေသူများ ) ကို အချို့ အကြုံပြုချက်များ တင်ပြလိုပါ တယ်။
၁။ ပါလက်စတိုင်း ၏ လွတ်လပ်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲ ဝင်ခြင်းသည် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်၏ လမ်း တွင် ဂျေဟာဒ် ပြုခြင်း နှင့် အစ္စလာမ် သာသနာ မှတောင်းဆိုတာ ထားသည့် မပြုမနေရ သမိုင်းပေးတာဝန် ဝတ္တရား တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတိုက်ပွဲတွင် အောင်မြင်မှု ဧကန်မလွဲ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ မိုဂျာဟစ်ဒ် အနေဖြင့် အသတ်ခံရလျှင်လည်း 'احدی الحسنیین' (ကြီးမားသည့် ကောင်းမှု ကုသိုလ် နှစ်ခု မှ တစ်ခု ) အား မလွဲမသွေ ဆွတ်ခူး နိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပြင် ပါလက်စတိုင်းကိစ္စ သည် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်ပေါင်းသိန်းပေါင်းများစွာသော် လူသားများ ကို ၎င်းတို့ ၏ အိမ် ၊လယ်ယာမြေ ၊ဘဝတည်ဆောက်နေဖို့ နှင့်လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့နေရာ မှ မောင်းထုတ်လိုက်ခြင်း မောင်းထုတ်ရ တွင်လည်း သတ်ဖြတ်ခြင်း ရာဇဝတ်မှုမြောက်သည့်ခြေလှမ်းများ ဖြင့်၎င်း ပြုလုပ်သည့် အတွက်ကြောင့် နှလုံးသား ရှိသူတိုင်းကို ထိခိုက်စေပြီး ဆွဲဆောင်စေပါတယ်။ ရဲစွမ်းသတ္တိ ရှိသည့် အခြေအနေတွင် ၎င်းတို့ နှင့်တိုက်ပွဲဝင် ဖို့ အသင့်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဤ အတွက်ကြောင့် ပါလက်စတိုင်း ပြဿနာ ကို ကိစ္စကို အာရပ် များ၏ပြဿနာ နှင့်ကိစ္စသာဟု သတ်မှတ်ခြင်းသည် အလွန်ကြီးမား သည့် အမေ့အမှား တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့ သူများ အနေဖြင့် အချို့ ပါလက်စတိုင်းသားများ သို့မဟုတ် အချို့ အာရပ် နိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင်များ ၏ ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး အတွ က် ကြိုးစား မှုများ ကို ဤ အစ္စလာမ်မီ ကိစ္စ နှင့် လူ့ အခွင့်အရေးပြဿနာ ကို သူအခြေအနေအပေါ် သူ လွတ်ထားခြင်းကို လုပ်ပိုင်သည်ဟု ထင်နေသူများ သည် ဤ ကိစ္စအား နားလည် ရာ တွင် အမှားကြီးမှားနေပါတယ်။ တစ်နည်း အားဖြင့် အချို့ အချိန်များ တွင် ဤကိစ္စတွင် သစ္စာဖောက်မှု ကိုပါ ကျူးလွန် နေကြပါတယ်
၂။ ဤတိုက်ပွဲ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပယ်လယ်မှ မြစ်အထိ (တစ်နည်းအားဖြင့် ရောမပင်လယ် (မြေထဲပင်လယ် ) မှ စ၍ ဂျော်ဒန် မြစ် အထိ ) ပါလက်စတိုင်း မြေအားလုံး၏ လွတ်မြှောက်ရေး နှင့် ပါလက်စတိုင်းသားများ အားလုံး (မိမိ)နိုင်ငံသို့ ပြန် နိုင်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ (ကြီးမားသည့် ရည်ရွယ်ချက် ) ကို ဤမြေပြင် ၏ ထောင့် တစ်နေရာရာ တွင် အစိုးရတစ်ခု ကို တည်ထောင် သည့်အထိသာ ဘောင်ခတ်ခြင်း ၊ ဤ သိက္ခာမဲ့ မလေးမစားပြုသည့် ဘောင်ခတ် မှု ကိုလည်း လည်း ယဉ်ကျေးမှုမရှိသည် ဇီယွန်များ ပြောသည်အတိုင်း ဆိုလျှင် ၊ အမှန်တရားရှာဖွေသူများ ၏လက္ခဏာ မဟုတ်နိုင် ချေ။ အမှန်တရား အဖြစ်မှန်၏ လက္ခဏာ လည်း မဟုတ်ချေ။ အမှန်တကယ် ယနေ့ သန်းပေါင်းများ စွာသော် ပါလက်စတိုင်းသားများ ၏ အတွေးအခေါ် နှင့် အတွေ့ အကြုံများ သည် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ခြင်း၏ ကြံကြံခံပြီး ဤကြီးကျယ်သည့် ဂျေဟာဒ်ကို ပြုရမည်ဆိုသည့် အထိရောက်နေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ၎င်းတို့ အနေဖြင့် အလ္လာဟ် ဟို အရှင့်မြတ် ၏ အကူအညီ နှင့် လုံးဝ အောင်မြင်မည်ဆိုသည့်အပေါ် အပြည့်အဝ ယုံကြည်ချက်ထား ရန် လိုပါတယ်။ အကြောင်းမှာ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် မှ
وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُه إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ..ဟုမိန့်တော်မူထားပါတယ်။ အင်န်ရှာအလ္လာဟ် ... ဧကန်မုချ လောကတွင် ပါလက်စတိုင်းများ ကို အကူအညီပေးမည့် မွတ်စလင်မ် အမြောက်အများ ရှိနေ ပါတယ်။ ၎င်းတို့ ၏ နာကျင်မှု နှင့်အတူ ရှိနေသူများ ရှိမည် ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဤတိုက်ပွဲ တွင် ဟလာ အားလုံး နှင့် ရှရီအီ အမှီ အငြမ်းများ ကမ္ဘာ အထောက်အပံများ အပါအဝင် အသုံးပြု ပိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အထူးသဖြင့် အနောက်တိုင်း အစိုးရများ နှင့် အပြင်ပိုင်း အတွင်းပိုင်း တွင် ၎င်းတို့အပေါ် မူတည်နေသည့် ကမ္ဘာ့ အဖွဲ့အစည်းများ ကို ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ် သင့်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် အစ္စလာမ်ကို အာနိသင်ဖြစ်စေ သည့် ခွန်အားတည်ရှိလာမှု၏ ရန်သူများဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် မနုဿာ လူသားများ နှင့်လူမျိုးစုများ ၏ အခွင့်အရေး ရပိုင်ခွင့်များ ကို မည်သို့ မျှ အလေးပြု ဂရုပြုမည် မဟုတ်ကြချေ။ ၎င်းတို့သည် မွတ်စလင်မ် အွန်မသ် ထု ကို အများဆုံး ဖြစ်စေသည့် ဆုံး ရှုံးမှုများ နှင့် မွတ်စလင်မ်များ အားဆန်ကျင့်သည့် ရာဇဝတ်မှုများ ၏ တာဝန်ခံများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဤအချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မည်သည့် အစ္စလာမ်မီ နိုင်ငံတွင် မဆို ၊ အာရပ်နိုင်ငံများ တွင်မဆို ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများ ၊ လူမျိုးပြုတ် သတ်ဖြတ်မှုများ ၊ စစ်ဖြစ်အောင် လှုံဆော်မူများ (စစ်ပွဲများ ) ၊ ဗုံးဖောက်ခွဲမှုများ ၊ သို့မဟုတ် ကပ်ဘေးဆိုး ဆိုက်မှုများ နှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သည့် ကမာ့္ဘ အဖွဲ့ အစည်း မှ အဖြေပေးနေပါသနည်း ?
ယနေ့ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းလုံး အတိုင်းအတာ အရ ကိုရိုနာ ရောဂါ ကြောင့် သေဆုံးသူများ ကို ရေတွက်နေကြပါတယ်။ သို့သော် အမေရိကန် နှင့်ဥရောပ ကြောင့် စစ်မီးတောက်နေသည့် နိုင်ငံများ တွင် သိန်းနှင့်ချီ၍ ရှဟီးဒ် ဖြစ်နေ ၊ထောင်ကျနေ ၊ပျောက်ဆုံးနေမှု အတွက် တာဝန်ရှိသူ တရားခံ ဘယ်သူလည်း ဟု၍ မည်သူမျှ မမေးကြချေ၊ မေးမည်လည်း မဟုတ်ပေ။ အာဖဂန် နိစ္စတန် ၊ယီမင် ၊ လစ်ဗျား ၊ အီရတ် ၊ဆီးရီးယား နှင့်အခြား နိုင်ငံများ တွင် ကျခဲ့သည့် အပြစ်မဲ့များ ၏သွေး အတွက် တရားခံဘယ်သူလဲ ? ပါလက်စတိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ရာဇဝတ်မှုများ ၊ မတရား ကျူးကျော်မှုများ ၊ပျက်စီးမှု ခြေလှမ်းများ နှင့် ရက်စက်ညှဉ်းပန်းနေမှုများ ၏ တာဝန်ခံ သည် မည်သူ ဖြစ်ပါသနည်း ? အစ္စလာမ် နိုင်ငံ များတွင် ထောင်ပေါင်းများစွာ ၊ သိန်းပေါင်းများစွာ သော် အရက်စက် အညှဉ်းပန်းခံ ပြည်သူများအမျိုးသမီးများ ကို မည်သူမှ ဘာကြောင့် မရေတွက်ကြရပါသနည်း ? မွတ်စလင်မ် အမျိုးပြုတ် သတ်ဖြတ်ခံရမှုကို ဘာကြောင့် မနှစ်သိမ့်ကြပါသနည်း ? သန်း ပေါင်းများစွာသော် ပါလက်စတိုင်း များ မိမိတို့အိမ် ကနေဝေးနေပြီး နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် ပြည်နယ်ဒဏ် ဘာကြောင့်ခံ နေရပါသနည်း ?
မွတ်စလင်မ်များ ၏ ပထမဆုံးမျက်နှာမူရသည့် နေရာကို ဘာကြောင့် စော်ကားနေကြပါသနည်း ? ကုလသမဂ္ဂ လို့ခေါ်သည့် ကုလသမဂ္ဂသည် မိမိ တာဝန်ဝတ္တရား ကို ဘာကြောင့် အကောင်အထည် မဖော်ပါသနည်း ? လူ့အခွင်းရေး အဖွဲ့အစည်းများလို့ခေါ်နေသည့် လူ့ အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း များ သေသွားကြပြီးလား ? ကလေးများ နှင့် အမျိုးသမီးများ အခွင့်အရေး ဆိုသည် ညာသံ သည် ယီမင် နှင့် ပါလက်စတိုင်း ရှိ အရက်စက် အနှိပ်စက်ခံနေရသည့် ကလေးများ နှင့် အမျိုးသမီးများ နှင့် မပတ်သက်ပါသလော?
ကမ္ဘာ့ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေသည့် အနောက်တိုင်း ကိုလိုနီ အင်အားကြီး နိုင်ငံများ နှင့် ၎င်းတို့ နှင့်နွယ်နေသည့် ကမ္ဘာ့ အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အချို့ ၎င်းတို့ နှင့်တစ်သားဖြစ်နေသည့် အစိုးရများ ၏ အခြေအနေသည် ဒေသအတွင်း အရှက်ကွဲ သိက္ခာမဲ့ပြီး ပြောရန်မသင့်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက် နေပါပြီး။
စိတ်အားထက်သန်ပြီး ဘာသာတရားရိုသေ ကိုင်းရှိုင်းသည့် မွတ်စလင်မ် အသိုင်းအဝိုင်း အတွက် မိမိ ကိုယ်ကို နှင့် မိမိအတွင်းရှိ အင်အား များ ကို အမှီ ပြုဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မိမိ၏ ခွန်အား ရှိသည့် လက်ကို အင်္ကျီလက်စ အပြင်သို့ ထုတ်ရပါမည်။ ပြီးနောက် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် အပေါ် အားကိုးယုံကြည်မှု ပြုပြီး အတား အဆီး များ ကို ဖြတ်ကျော် ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ အရေးကြီးသည့် ပွိုင့် မှာ နိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင်သူများ နှင့် အစ္စလာမ် ကမ္ဘာ့ ၏ စစ်ရေး နှင့် မဝေးနေရန် ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် နှင့် ဇီယွန်တို့ ၏ နိုင်ငံရေးဝါဒမှာ ကြံကြံခံ အဖွဲ့များ ၏နောက်မှ စစ်ပွဲများ ကို ဖန်တီးရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးရီးယား နိုင်ငံ အတွင်း ပြည်တွင်း စစ်ဖြစ်လာအောင် ဖန်တီး ခြင်း ၊ ယီမင် နိုင်ငံ အား စစ်ရေး အရ ပိတ်ဆို့ ခြင်း နေည သတ်ဖြတ်ခြင်း အီရတ် နိုင်ငံ အတွင်း လုပ်ကြံမှု နှင့် ဖျက်စီးမှု ပြုခြင်း ၊ ပြီးနောက် ဒါအေရှ် (ISIS) ကို မွေးဖွားပေးခြင်း အသွင်တူ အလားတူ အခြား ဒေသတွင်း ရှိ နိုင်ငံများ တွင် ဖြစ်ပေါ် မှုများ အားလုံး ၏လှည့်ကွက်များ သည့် ကြံကြံခံ ခုခံအဖွဲ့များ၏ အလုပ်ကိုရပ်စေပြီး ဇီယွန် အစိုးရကို အခွင့်အရေး ရအောင် ပြုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အချို့ သောမွတ်စလင်မ်နိုင်ငံများ မှ နိုင်ငံရေး သမားများ သည် သိလျက် ဖြစ်စေ မသိ၍ ဖြစ်စေ ဤရန်သူ ၏ လှည့်ကွက်များ တွင် ဝင်သွားကြပါတယ်။ ဤဆိုးညစ် ယုတ်မာသည် ပေါ်လစီ (နိုင်ငံရေး ) အား မဖြစ်ပေါ်လာအောင် တားဆီးရသည့် လမ်း မှာ များသော်အားဖြင့် အရှက်တရား သိက္ခာ ရှိသည့် အစ္စလာမ် ကမ္ဘာ့ ရှိ လူငယ်လူရွယ်များ ကို အလေးအနက်ဖိတ်ခေါ် မှု ပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်နိုင်ငံများ နှင့် အထူးသဖြင့် အာရပ် နိုင်ငံ ရှိ လူငယ် လူရွယ်များ အနေဖြင့် ကြီးကျယ် ခန့်နားသည့် အေမာမ်ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ အကြံပြုချက် ကို မလွဲမသွေ လေ့လာရပါမည်။ မိန့်ထားသည်မှာ - အမေရိကန် အပေါ် မည်မျှ ညာသံပေးလိုပါသလဲ ထို အတိုင်း ရန်သူ ဇီယွန်အပေါ် ညာသံပေး ပါလေ။
၅။ ဒေသအတွင်း ဇီယွန် အစိုးရ (အစ္စရေး အစိုးရ) ကိုပုံမှန် ဖြစ်အောင် ပြုရန် မှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အတွက် အခြေခံအကျဆုံး မူဝါဒတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ အာရပ်နိုင်ငံများ သည် ဒေသအတွင်း အမေရိကန် ၏ အကွက် အစီအစဉ်ဖြစ်ပေးလာရန်အတွက် လုပ်ပေးကြပါတယ်။ ဤ အကြောင်းကိစ္စ အတွက် လိုအပ်သည့် ရှေ့ ပြေးများ ကို စီစဉ်ပေးပါတယ်။ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်များ ထိုနည်းတူ များကို ပြုလုပ်ပေးကြပါတယ်။ ဤ ကြိုးပမ်းမှုများ သည် လုံးဝ မြုံပြီး ရလာဒ် မရဖြစ်စေပါတယ် ။ ဇီယွန် အစိုးရသည် ဒေသတွင်းအတွက် အန္တရာယ် နှင့် ဆုံးရှုံးမှု ကိုသာ ထပ်၍ တိုးစေပါတယ်။မုချဧကန် အမြစ်ပြုတ် ရှင်းထုတ်ခြင်းကို ခံရမည် ဖြစ်ပါတယ် ။ ဤနယ်ချဲ့ ကိုလိုနီ အစိုးရ အား အလုပ်အကျွေးပြုသူ မည်သူမဆို အရှက်ကွဲ နာမည်ပျက် ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့ သူများ သည် ဇီယွန် အစိုးရ သည် အမှန်တကယ် ဒေသအတွက် ဖြစ်သည်ဆိုသည့် အကျည်းတန် သည့် လုပ်ရပ် အတွက် သက်သေ အဖြစ် အကြောင်းပြကြပါတယ်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် သေစေနိုင်ပြီး ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည့် အဖြစ်မှန်များ ကို တိုက်ရပြီး ရှင်းထုတ်ရသည်ဆိုတာ ကို သတိမရဖြစ်နေပါတယ်။ ယနေ့ ကိုရိုနာ ပိုး ဖြစ်ရပ်မှန် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အသိဥာဏ်ရှိသူတိုင်း ကိုရိုနာ ကို ဆန်ကျင့်ပြီးတိုက်ဖို့ မပြုမနေရအဖြစ် သိကြပါတယ်။ ဇီယွန် သည်လည်း နှစ်ရှည်လများ ကြနေသည် ဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒွဟမရှိ အများကြီး ရပ်တည်နေဖို့ မလွယ်တော့ ဘူးဆိုတာဖြစ်ပါတယ် ။ လူငယ်လူရွယ်များ ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိ ၊အီမာန်၏ ခွန်အား နှင့်အရှက်သိက္ခာ ရှိမှု တို့သည် ၎င်းဇီယွန် အား ဤ ဒေသတွင်းမှ အမြစ်နှုတ်၍ ပစ်ထုတ်ကြ ပါလိမ့်မည်။
၆။ ကျွန်တော် ဘက်မှ အခြေခံအကျဆုံး အကြံပေး ချက်မှာ အဆက်မပြတ် သည့် ကြိုးပမ်း မှု ၊ မိုဂျာဟစ်ဒ် အဖွဲ့အစည်းများ ကိုထပ်လောင်း၍ အားကောင်း အောင်ပြုခြင်း၊ ၎င်းတို့အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အကူအညီပေးပြီး ဂျေဟာဒ် စက်ဝိုင်း အား ပါလက်စတိုင်း ဒေသများ အားလုံး အထိရောက်အောင် ဖြန့်ခြင်း ၊ ဤမြင့်မြတ်သည် ဂျေဟာဒ် တွင် အားလုံးအနေဖြင့် ပါလက်စတိုင်း လူမျိုးအား ကူညီဖေးမ ရပါမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအနေဖြင့် ပါလက်စတိုင်း မိုဂျာဟစ်ဒ်များ ကို အပြည့်အဝ ကျောထောက် နောက်ခံ အားပေးကူညီရပါမည်။ ဤလမ်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှာ ရှိသည့် အရာကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ရှိသမျှ အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်း မိုဂျာဟစ်ဒ်များထံ တွင် သာသနာ ၊ အရှက်သိက္ခာ ၊ နှင့် ရဲစွမ်းသတ္တိ ရှိသည့် အချိန်အခါကို ရောက်မည်ဖြစ်ပါ တယ်။၎င်းတို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော် အခက်အခဲ မှာ လက်နက် မရှိ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ကူညီပြီး အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်၏ လမ်းညွှန် မှု ဖြင့် အစီအစဉ် ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ရလာဒ်မှာ ပါလက်စတိုင်း ခွန်အား ချိန်ခွင်လျှာ ပြောင်း သွားပါခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ဂါဇာ တွင် ရန်သူဇီယွန် အစိုးရ ၏ ကျူးကျော် စစ်တပ် နှင့်ယှဉ်၍ ရပ်နိုင်သွားပါပြီး ။ ၎င်းတို့ကို လွမ်းမိုးနိုင်ပါပြီး။ အသိမ်းပိုက်ခံထားရသည့် ပါလက်စတိုင်း လို့ခေါ်ဆိုနေသည့် ဒေသများတွင် ခွန်းအား ၏ချိန်ခွင်လျှာ ပြောင်းလဲ လာမှုကြောင့် ပါလက်စတိုင်းများ ကို ၎င်းတို့၏ နောက်ဆုံး စခန်း အနီးကို ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စ တွင် ပါလက်စတိုင်း တာဝန်ရှိသူများ ၏ ပုခုံး အပေါ်တွင် အလွန်ကြီးမားလေးလံသည့် တာဝန် ရှိနေပါတယ်။ ရိုင်းစိုင်းယုတ်ညံ့သည် ရန်သူများ ကို အာဏာ ရှိသည့် အစွမ်း အစ ရှိသည် အသံဖြင့်သာ စကား ပြောသင့်ပါတယ်။ ဤကဲ့သို့သော် ခွန်အားများ အတွက် ပါလက်စတိုင်း တို့ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသည့် မိုဂျာဟစ်ဒ် လူမျိုးများ ၏ အတွင်း အလ်ဟမ်ဒိုလစ်လ္လာဟ် ရှေ့ပြေး များ ရှိနေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်း လူငယ်များ သည် ယနေ့ မိမိတို့၏ အရှက်သိက္ခာ ကို ကာကွယ် ဖို့ ဆာလောင် နေကြပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်း တွင် ဟမါစ်နှင့် ဂျေဟာဒ် ဒေအစ္စလာမ်မီ ပြီးနောက် လက်ဘနွန် တွင် ဟေစ်ဘွလ္လာဟ် တို့ အနေဖြင့် အားလုံး အပေါ် တာဝန်ကျေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ အနေဖြင့် ဇီယွန် စစ်တပ် မှ လက်ဘနွန် နယ်စပ် ကို ကျော်ပြီး ဘေရွတ်မြို့အထိ တက်လာပြီး အီရီအလ် ရှီရွန် အမည်ရှိ ရာဇဝတ်သား မှ ဆါဗ်ရာန် နှင့် ရှသီလန် တွင်သွေးချောင်းစီးစေသည့်နေ့ကို မေ့မည် မဟုတ်သလို့ မေ့လို့လည်းရမည် မဟုတ်ချေ။
ထိုနည်းတူ စွာ ဟေစ်ဘွလ္လာဟ်၏ အားကောင်းသည့် တိုက်ခိုက်မှုများ ကြောင့် ဇီယွန် တပ် မည်သည့်လမ်းမျှ မရှိတော့ဘဲ အကြီးအကျယ် ဆုံးရှုံးမှု နှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ စစ်ရှုံးကြောင်း ဝန်ခံ ပြီး လက်ဘနွန်၏ နယ်စပ်ကနေ နောက်ပြန် ဆုတ်ပေးရပြီး စစ်ပြေငြိမ်းဖို့မေတ္တာ ရပ်ခံရသည့် နေ့ကိုလည်း မေ့မည်မဟုတ်ချေ။ မေ့၍ရမည် မဟုတ်ပေ။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အာဏာ ရှိမှု၏ ရလာဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆဒန် အစိုးရအား ဓာတုလက်နက်များ ရောင်းချ၍ အမြဲ အရှက်ရနေသည့် ဥရောပ အစိုးရ၏စကားကိုတော့ ထားလိုက်ပါအုန်း ။ မိုဂျာဟစ်ဒ် နှင့် ခေါင်းထောင်ပြီးဂုဏ်ရှိစွာနေနေသည့် ဟေစ်ဘွလ္လာဟ် အား တရားမဝင် သတ်မှတ်လိုက်သေးသည်။ တရားမဝင် တာတော့ အမေရိကန် ကဲ့သို့ အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအေရှ် (ISIS) ကိုမွေးထုတ်ခဲ့သည့်အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။ တရားမဝင် အစိုးရ မှာ ထိုဥရောပ အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။၎င်း၏ ဓာတု လက်နက်များ ကြောင့် အီရန် နိုင်ငံ ရှိ ပါနေဒေသနှင့် အီရတ် နိုင်ငံရှိ ဟလက်ဗ်ကြေး ဒေသ တွင် ထောင်ပေါင်းများ စွာသော် သူများ သည် သေဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်။
၇။ နောက်ဆုံးစကားအနေဖြင့် ပြောလိုသည်မှာ ပါလက်စတိုင်းနှင့် ပါလက်စတိုင်းများကိစ္စ ဖြစ်ပါ တယ်။ ၎င်းတို့၏ ကိစ္စများ ကို ၎င်းတို့၏ သဘောဆန္ဒ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်း ရှိ ဘာသာပေါင်းစုံ နှင့်လူမျိုး ပေါင်းစုံ ပါဝင် နေသည့် အစီအစဉ် တစ်ခုဖြစ်သည့် ဆန္ဒခံယူ မှု ကို ယေဘုယျအားဖြင့် ဆယ်စု နှစ် ၊ နှစ်ခု အလျှင်က ကျွန်ုပ်တို့ တင်ပြ အကြံပြု ထားပြီးပါပြီး ။ ထိုအစီအစဉ် အကြံပြုချက်သည် ယနေ့ စိတ်ခေါ်မှု နှင့် ပါလက်စတိုင်း တို့၏ အနာဂတ် အတွက် တစ်ခုတည်းသော် အဆင်ပြေမည့်ဖြေရှင်းပေးမည့် လမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကြံပြုချက် သည် ရဟူဒီ မုန်းတီးရေး ရေးဝါဒ၏ အနောက်တိုင်း အင်အားကြီးများ၏ ဝါဒဖြန့်ချိရေး လမ်းကြောင်းများမှ တဆင့်ထပ်ခါတလဲလဲ ဆက်လက်ပြောဆိုနေခြင်း အား လုံးဝအခြေ အမြစ် မရှိကြောင်း သက်သေ ပြနေ ပါတယ်။ ဤအကြံပြု ချက် အရ ပါလက်စတိုင်း ရဟူဒီများ ၊ခရစ်ယာန်များ နှင့်မွတ်စလင်မ်များ ကို အတူတူဆန္ဒခံယူပွဲ တွင် ပါဝင် နိုင်ကြပြီး ပါလက်စတိုင်း အတွက် နိုင်ငံရေး ပေါ်လစီ စနစ် ကို သတ်မှတ် ပေး ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့် အခြေအနေတွင်မဆို ဖယ်ရှားရမည့် စနစ် မျာ ဇီယွန် စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက် ဇီယွန်ဝါဒကိုယ်တိုင် သည် ရဟူဒီ ဘာသာ တွင် အသစ် ထွင်ထားသည့် ဝါဒတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ရဟူဒီ နှင့် လုံးဝ တခြား မသက်ဆိုင်ချေ။
နောက်ဆုံးတွင် ရှိက်္ခ အဲဟ်မဒ် ယာစင် ၊ ဖသ်ဟာ ရှကာကီ ၊ ဆရက်ဒ် အဘာစ် မူစဝီ မှစ၍ အစ္စလာမ် ၏ ကြီးကျယ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကြံကြံခံ အဖွဲ့ ၏ မေ့မရသည့် အရေးပါ အရာရောက် ပုဂ္ဂိုလ် ရှဟီးဒ် ကာစင်ဆိုလိုင်မန်နီ နှင့် အီရတ် ၏ ကြီးကျယ် သည့် မိုဂျာဟစ်ဒ် ရှဟီးဒ် အဘူ မဲဟ်ဒီ အလ်မိုဟန်ဒစ် နှင့်အခြား ကွတ်စ် ရှဟီးဒ်များ ကို လေးစားဂုဏ်ပြု အပ်ပါတယ်။ ပြီးနောက် ရဲဟ်ဗရ်ကဘီး အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) နှင့် ရူဟ် အပေါ် သရူးစလာမ်ပို့သပါတယ်။ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) အနေဖြင့် သိက္ခာ ရှိပြီး ဂျေဟာဒ် လမ်းကို ကျွန်တော်တို့ အား ထူထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာ မိုဂျာဟစ်ဒ် ညီနောင် မရ်ဟွန်မ် ဟိုစိန် ရှိက်္ခ ခိုလ်အစ္စလာမ် အတွက် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ ထံတော်ဝယ် ရဲဟ်မသ် နှင့်မဂ်ဖေရသ် တောင်းခံအပ်ပါတယ်။ ၎င်းအနေဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဤလမ်းတွင် အပင်ပန်းခံ ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။